အမ်း နဲ့ မြေပုံက လည်ပင်းဖြတ်သတ်ခံရသူ သုံးဦးကို အေအေ သတ်တာလို့ တပ်မတော် စွပ်စွဲ
အမ်း နဲ့ မြေပုံက လည်ပင်းဖြတ်သတ်ခံရသူ သုံးဦးကို အေအ...
11 ก.ย. 2562 - 00:25 น.
ရခိုင်ပြည်နယ် မြေပုံမြို့နယ်နဲ့ အမ်းမြို့နယ်မှာ နှစ်ရက်အတွင်း လူ သုံးဦး လည်ပင်းဖြတ် အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီလူတွေကို အေအေ အဖွဲ့က သတ်ဖြတ်တာလို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး ဝက်ဆိုက်သတင်းစာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေဘက်ကတော့ ဒီလိုဖော်ပြတာကို တုံ့ပြန်တာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
အခု ခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ခံရသူ သုံးဦးဟာ မြေပုံမြို့နယ် ကမ်းထောင်းကြီးမြို့က ဦးညီညီထွေး(၄၀ နှစ်)၊ သဲကမ်းထောင်း ကျေးရွာက ဦးမောင်လုံး (၄ဝ နှစ်)နဲ့ အမ်းမြို့ နယ် မဲလက်မောင်းကျေးရွာက ဦးခိုင် တို့ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
အမ်းမှာ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်က အသတ်ခံရတဲ့ ဦးခိုင်ဟာ သတင်းထောက် တစ်ဦးလို့ မီဒီယာ တချို့မှာ ဖော်ပြထားပြီး ဘီဘီစီကတော့ သီးခြား အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။
ရသေ့တောင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နုတ်ထွက်
ပုဏ္ဏားကျွန်း ယိုးတရုတ်ရဲစခန်းက ဒုရဲအုပ် ဓားထိုးသတ်ခံရ
မြေပုံမြို့နယ်က အသတ်ခံရတဲ့ နှစ်ဦးကို လည်ပင်းတွေကို ဖြတ်ပြီး ကမ်းထောင်းကြီးမြို့ထဲက ဈေးလမ်းပေါ်မှာ ချထားတယ်လို့ မျက်မြင်တွေ့ရှိတဲ့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
မြေပုံမြို့နယ် ကမ်းထောင်းကြီးမြို့က ဦးညီညီထွေးနဲ့ သဲကမ်းထောင်း ကျေးရွာက ဦးမောင်လုံးတို့ရဲ့ ခေါင်းပြတ်နေတဲ့ အလောင်းတွေကို စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက် မနက်က ကမ်းထောင်းကြီးမြို့ ဈေးလမ်း လူမြင်ကွင်းမှာ ချထားခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
"လူမြင်ကွင်း ဈေးလယ်ခေါင်မှာ လူသတ်ပြီး ချထားတယ် ခင်ဗျ။ … ကျွန်တော်တို့ သုံးသပ်တာကတော့ ရွာအပြင်က သတ်လာပြီးတော့ ဈေးလယ်ခေါင်မှာ လူမြင်ကွင်း ချထားတာ။ လူတွေ သုံးသပ်ချက်ကတော့ စစ်တပ်ကို သတင်းပေးတယ် ဆိုပြီးတော့ သုံးသပ်ချက်ချတယ်" လို့ ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ခဲ့တဲ့ ကမ်းထောင်းကြီးမြို့ပေါ်က ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
"အလောင်းတွေက ဒီမှာပဲ ဆေးရုံမှာ စစ်ပြီး ဒီမှာပဲ သင်္ဂြိုဟ်လိုက်တယ်" လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
ဒီသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကိုရော ကျောက်ဖြူခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကို ရော ဆက်သွယ်ပေမယ့် ဖုန်းမကိုင်ကြပါဘူး။
အမ်းမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ လူ ၃ ဦး အသတ်ခံရတာကို အတည်ပြု ပြောပါတယ်။
ဒီလူတွေကို သတ်ဖြတ်တဲ့သူကို စိစစ်နေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အခုလို အရပ်သားတွေ အသတ်ခံနေရတာ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့တိုးလာနေရာမှာ အခု ခေါင်းဖြတ် သတ်ဖြတ်တာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကမ်းထောင်းကြီးမြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က ရပ်ကွက် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦး အသတ်ခံခဲ့ရသလို အဲဒီရွာအနီးက ပေါက်တူးတောင် ကျေးရွာမှာလည်း ရွာသား နှစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နဲ့ ၁၀ ရက် လူ သုံးဦး လည်ပင်းဖြတ် သတ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလူတွေကို အေအေ အဖွဲ့က သတ်ဖြတ်တာလို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး သတင်းစာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီဖော်ပြချက်မှာ အေအေ အဖွဲ့ကို အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူလို့လည်း သုံးနှုန်းဖော်ပြထားပါတယ်။
နှစ်ဦးက ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရပြီး တစ်ဦးက အိမ်မှာ လည်ပင်းကို ဓားနဲ့ ခုတ်သတ်ခံရတာလို့ ဆိုပါတယ်။
အေအေ အဖွဲ့က သူတို့ကို မထောက်ခံတဲ့သူတွေကို သတ်ပြီး လမ်းလေးခွဆုံမှာ ခေါင်းနဲ့ နားရွက်တွေ ဖြတ်ပြီး ကိုယ်ပေါ်တင်ထားခဲ့တာလို့ အဲဒီ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လက စပြီး အခု အသတ်ခံရသူ သုံးဦး အပါအဝင် အဲဒီအဖွဲ့ကို မထောက်ခံတဲ့ ဒေသခံ၊ ရပ်ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း ၁၂ ဦး ကို အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူတွေက သတ်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အမ်း နဲ့ မြေပုံက လည်ပင်းဖြတ်သတ်ခံရသူ သုံးဦးကို အေအေ သတ်တာလို့ တပ်မတော် စွပ်စွဲ